Haddii Imaaraadka ay sidan ku sameeyeen Mareykanka ma u daahayaan Somalia? - Caasimada Online
Home Warar Haddii Imaaraadka ay sidan ku sameeyeen Mareykanka ma u daahayaan Somalia?
Haddii Imaaraadka ay sidan ku sameeyeen Mareykanka ma u daahayaan Somalia?
Dubai (Caasimada Online) – Soomaali badan ayaa aad uga carreysan faro-gelinta siyaasadeed ee Imaaraadka Carabta ay ku hayaan siyaasadda gudaha dalka Soomaaliya, oo ay qas xooggan ka wadaan.
Hase yeeshee waxaa hadda soo baxday, in iska daa Soomaaliya, Imaaraadka ay xitaa faro-geliyeen siyaasadda Mareykanka iyo doorashadii dalkaas ka dhacday 2016, ayaga oo taageero siinaya Donald Trump, sida ay baahiyeen warbaahinta Mareykanka.
Hase yeeshee, Wasiiru dowlaha arrimaha dibedda Anwar Gargash ayaa arrintan ku beeniyey qoraal uu soo dhigay barta twitter-ka, kadib markii warbaahinta Mareykanka ay sheegeen in Donald Trump Jr, uu la kulmay safiirada Sacuudiga iyo Imaaraadka, sanaddii 2016.
Su’aasho waxay tahay, haddii Imaaraada Carabta ay faro-geliyeen Mareykanka, oo ah dalka ugu quwadda weyn dunida, ma u daahayaan Soomaaliya?